Giredhi 35 SmCo Magnet vagadziri uye vanotengesa | Horizon
Double mativi Fishing Magnet
Giredhi 35 SmCo magineti kana giredhi 35 Samarium Cobalt magineti parizvino ndiyo ine simba kwazvo Samarium Cobalt magineti pamusika. Izvo zvakasarudzika zvakakwirira zveSmCo zvinhu zvinopa yakakura simba chigadzirwa, ngura kuramba, yakanakisa tembiricha kugadzikana uye tembiricha demagnetization kuramba.
Kare, giredhi 30 kana 32 ndiyo yepamusoro Samarium Cobalt giredhi iyo ingangoita zvese China SmCo magineti vatengesi vaigona kupa. 35 giredhi Samarium Cobalt yaitongwa nemamwe makambani eUS, saArnold (Arnold Magnetic Technologies, giredhi RECOMA 35E), EEC (Electron Energy Corporation, 34 giredhi SmCo). Horizon Magnetics ndeimwe yemakambani mashoma emagineti aigona kupa magiredhi makumi matatu nemashanu maSmCo magineti muhuwandu hwakawanda neBr> 11.7 kGs, (BH) max> 33 MGOe uye Hcb> 10.8 kOe.
1. Simba rakawanda asi huremu hwakaderera. Kune Samarium Cobalt, iri giredhi rinowedzera kuwanda kwesimba kuitira kuti ikwane mamwe mapikicha akakosha uko saizi diki uye kugadzirisa mashandiro chinhu chakakosha.
2. Kugadzikana kwepamusoro. Kune iri giredhi, BHmax, Hc uye Br yakakwira kupfuura yapfuura mamakisi epamusoro eSm2Co17 magineti senge 32 giredhi, uye tembiricha kudzikama uye yakanyanya kushanda tembiricha inova nani.
1. Motorsports: Mune iyo motorsports, ndicho chinangwa chekupedzisira kuhwina makwikwi anotyisa kuburikidza kutora mukana wekuvandudza zvinhu kuti uwedzere torque uye kumhanyisa nekapaketi kadiki uye kakatsiga.
2. Kutsiva magineti epamusoro emaNeodymium: Munguva zhinji, Samarium Cobalt mutengo unodhura kupfuura Neodymium magineti, saka Samarium Cobalt magineti inonyanya kushandiswa kumisika uko Neodymium magineti isingakwanise zvakakwana kusangana nezvinodiwa zvakakosha. Heavy isingawanzike pasi Dy (Dysprosium) uye Tb (Terbium) ine diki dura munzvimbo dzakatemerwa asi zvichidikanwa kumakomo ekupedzisira eNeodymium magineti anosanganisira giredhi AH, EH kana kunyange UH, mazhinji acho anoshandiswa mune akawanda magetsi emagetsi. 2011 yakapupurira kusimuka kwemapenzi kwemutengo wepasi usingawanzo Kana isingawanzo mutengo wepasi iri kukwira, 35 giredhi Samarium Cobalt, kana kunyange 30 giredhi inogona kuve yakanakisa imwe magineti zvinhu kune magineti vashandisi kuti varambe vakagadzikana zvakanyanya mutengo uchienzaniswa nevavanokwikwidza. Nekuda kwekunakisisa tembiricha kugadzikana, BHmax yegiredhi 35 Samarium Cobalt inova nani kupfuura N42EH kana N38AH yeNeodymium magineti pane tembiricha inopfuura 150C degree.
Kufananidza kweSmCo uye NdFeB paTemplates
Pashure: SmCo5 Magnet
Zvadaro: Magnetic Recess Yakare
Disc SmCo Magineti
Rectangle Samariu ...
SmCo chidimbu Magineti